HJRA : Mitaky ny amoahana an'i Profesora Auberlin ireo mpitsabo sy mpiasan'ny hopitaly
vendredi, 08 octobre 2021 15:02
Marary ao amin'ny hopitaly i Eddy Maminirina, voatana vonjimaika mbola tsy vita fitsarana tanteraka, eny Tsiafahy, noho ny resaka bois de rose. Raha ny fantatra dia nandalo fandidiana ka nanesorana ny avokavoka nefa mbola sempotra ihany ny lehilahy.
Nandalo tao amin'ny efitra tokony hisy azy ny polisy nefa naka rivotra teny amin'ny parking ao amin'ny faritry ny hopitaly no nahitana azy. Manana mpiandry fonja 4 no miandry azy eny amin'ny hopitaly.
Nampanantsoana eny amin'ny Surveillance du territoire Anosy Patte d'éléphant anefa i Profesora Auberlin Rakototiana lehiben'ny servisy misy ny marary, miaraka amin'ny Tale DAT, ka avy dia nogiazana ao, ary ampangaina ho mpiray tsikombakomba fampandosirana gadra.
Tsy niandry ela ireo mpiara-miasa amin'ireto Profesora ireto fa avy dia nampiato ny asa ary dia nanao fitokonana ao anivon'ny hopitaly. Na ireo ao amin'ny HJRA, na ireo eny amin'ny Hopitaly Befelatanana dia niray hina manohana ireo mpitsabo ireo.
"Mpitsabo izahay hoy izy ireo fa tsy mpiambina gadra". Asan'ny mpiandry fonja izany hoy izy ireo, fa tsy asanay izay manao ny asanay amin'ny fitsaboana, rahateo ny marary eo anivon'ny faritry ny hopitaly hatrany.